Umthetho-siseko | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: UMthetho woMthethosisekelo
yintoni inqaku leCandelo leNkqubo yePalato ye-51 RF
luhlobo luni lwenqaku leKhowudi yoLwaphulo-mthetho yeRussian Federation Ngaba kujongwe kwiNqaku lama-51 loMgaqo-siseko weRussian Federation onika ilungelo lokungazichaseli ngokwakho, abo ubathandayo, isangqa sazo sichazwe nguMthetho weRussian Federation. Inqaku leKhowudi yoLwaphulo-mthetho 51. Uthintelo ...
Yimiphi imisebenzi kunye namalungelo ababonayo kwintetho kwiRussia Federation?
Yintoni imisebenzi noxanduva lwabalindi bonyulo kwiRussian Federation? Bukela. ... Ukukhetha ngempumlo .. Kubavoti… Umntu obukeleyo unelungelo: - lokuqhelana noluhlu lwabavoti; -ba kwisikhululo sokuvota sokhetho ...
imbuyekezo yintsingiselo yeli gama
imbuyekezo - intsingiselo yeli gama Kwinkqubo yezomthetho Imbuyekezo yemali Imbuyekezo yomonakalo; Umvuzo welungelo elingasetyenziswanga; Indlela yokuhlawula uxanduva ngokususa amabango omntu onetyala kunye nalowo ubolekayo; Ukukhutshwa kwezibalo zemali kunye nexesha elinye ...
Luluphi uxwebhu oluthi iRussia ililandela ngokusemthethweni kwi-USSR?
Luluphi uxwebhu oluthi iRussia ililandela ngokusemthethweni kwi-USSR? NgoJanuwari 13, 1992, uMphathiswa Wezangaphandle waseRussia wathumela inqaku kwiintloko zoonozakuzaku eMoscow esithi iRussian Federation iyaqhubeka nokuphumeza ...
Kuzo izifundo zolawulo olulodwa lweRussian Federation olusebenzayo?
Ngaba ikulawulo olukhethekileyo lweRussian Federation? Nkosi, ulumke kangakanani. Ewe, ngaba kunzima ngenene ukufikelela kwincwadi kunye ne-splurge kuMgaqo-siseko weRussian Federation? Isiqendu 71 soMgaqo-siseko ...
Mayelana nezikhundla zikaRhulumente kunye nabasebenzi bakarhulumente
Akukho zikhundla zikarhulumente kunye nabasebenzi bakarhulumente. Umsebenzi waseburhulumenteni akanguye umsebenzi waseburhulumenteni, ngelixa lowo uneofisi kawonkewonke enayo. Inqaku lesi-3.
umgaqo womgaqo-siseko weRussian Federation, umxholo wayo kunye nemithombo.
umxholo womthetho womgaqo-siseko weRussian Federation, umxholo wayo kunye nemithombo. Umgaqo-siseko lisebe lomthetho elilawula umbutho wamandla elizweni, ezona ndlela ziphambili zokusebenzisa eli gunya, ubudlelwane phakathi kukarhulumente nabemi ...
umongameli ungumgcini womgaqo-siseko?
umongameli ngunoqinisekiso womgaqo-siseko Ewe ngokoMgaqo-siseko, ewe! Isahluko 4. UMongameli we-Russian Federation Isiqendu 80 1. UMongameli we-Russian Federation yintloko yelizwe. 2. UMongameli weRussian Federation ngugaranti woMgaqo-siseko weRussian Federation, ...
Kwimeko enjani, uMongameli weRussia Federation unelungelo lomgaqo-siseko lokuchithwa kwe-State Duma?
Kweziphi iimeko apho uMongameli weRussian Federation enelungelo lomgaqo-siseko lokuchitha iState Duma? Kule meko, kubhetele ukusebenzisa umthombo wokuqala. Masibuyele kuMgaqo-siseko weRussian Federation 1. I-State Duma inokuchithwa nguMongameli waseRussia.
ukuchaneka okusemthethweni nokukhethekileyo-ukuchazwa ngokomthetho komhlathi.4, isihloko.15, yomGaqo-siseko weRussia Federation?
ukuqondakala kunye nokucaciswa okukhethekileyo kwezomthetho kwegatya 4 lenqaku 15 loMgaqo-siseko weRussian Federation? Imithetho ye-Russian Federation ayinakuphikisana nemilinganiselo eyamkelweyo yomthetho wamanye amazwe. Ngaphandle koko, azisebenzi 1. Imigaqo ngokubanzi kunye nemilinganiselo ye-int. amalungelo,…
Uluhlu lwezithuba, ukuqeshwa okwenziwa nguMongameli waseRussia Federation
Uluhlu lwezikhundla ezichongwe nguMongameli weRussian Federation Inqaku lama-83 loMgaqo-siseko weRussian Federation UMongameli weRussian Federation: a) utyumba, ngemvume kaRhulumente uDuma, uSihlalo kaRhulumente weRussian Federation; d) imele uRhulumente ...
Indlu yowiso-mthetho. apha imelwe yiNdibano ye-Federal. yeyiphi eminye imibuzo eya kubakho?) E-Russia, amandla ezomthetho amelwe yi-bicameral Federal Assembly, ebandakanya i-State Duma kunye ne-Federation Council, kwimimandla ...
Amandla eNkundla yoMgaqo-siseko weRussia Federation
Amandla eNkundla yoMgaqo-siseko yeRussian Federation Umgaqo-siseko woMthetho woMgaqo-siseko "KwiNkundla yoMgaqo-siseko yeRussian Federation" Inqaku loku-1: INkundla yoMgaqo-siseko yeRussian Federation liqumrhu lezomthetho lolawulo lomgaqo-siseko, ngokuzimeleyo nangokuzimeleyo basebenzisa amandla ezomthetho ngokusebenzisa umgaqo-siseko ...
st xnumx yintoni le nqaku
Ubugcisa be-49 luhlobo luni lwenqaku le-Russian Federation Art. Ukucinga ukuba umsulwa; Ubugcisa beAPC RF. 49 Ukutshintsha isiseko okanye umxholo webango, ukutshintsha inani lamabango, ukuyekiswa kwebango, ukwamkelwa kwebango, ngoxolo ...
I-24 inqaku loMgaqo-siseko weRussia Federation
Inqaku lama-24 loMgaqo-siseko weRussian Federation Ngokwesiqendu 2 soBugcisa. 24 yoMgaqo-siseko weRussian Federation "Abasemagunyeni boMbuso kunye namaqumrhu azimeleyo aseburhulumenteni, amagosa abo anyanzelekile ukuba anike wonke umntu ithuba lokuziqhelanisa namaxwebhu kunye nezinto, ...
ubhale phantsi amanyathelo enkqubo yokhetho kunye nenkcazo nganye ngalunye
ezaposwa ngomhla 22.08.2017 18.09.2018
Chaza amanqanaba enkqubo yonyulo nengcaciso nganye nganye Inkqubo yonyulo, inkqubo yokulungiselela nokubamba unyulo olulawulwa ngumthetho. Inamanqanaba azimeleyo ngokwahlukeneyo ahlukileyo omnye komnye kwimisebenzi, kwisangqa ...
Luhlobo luni lwesakhiwo sombuso saseRashiya lufakwe kuMgaqo-siseko? Ndothuka
Ngaba loluphi uhlobo lobume belizwe laseRussia olufakwe kuMgaqo-siseko? Ndothukile umfelandawonye, ​​kodwa wothuswa kukuqamba? Umxholo unomdla! Inqaku loku-1 1. IRussian Federation - iRussia ...
Iinkalo eziphambili zamalungelo nenkululeko yomntu kunye nommi. Nceda ufumane impendulo.
Ezona ntlobo ziphambili zamalungelo oluntu kunye noluntu kunye nenkululeko. Ndincede ndifumane impendulo. Amalungelo obuntu, ezentlalo, ezopolitiko, ezoqoqosho kunye nenkululeko yomntu neyommi zahlulwe zangundoqo (zingenakuphikwa), zisisiseko (zomgaqo-siseko) kwaye zamkelwe ngokubanzi ...
Ngaba umthengi angabuyisela isitifiketi sesipho kwisitoreji?
Ngaba umthengi angabuyisa isatifikethi sesipho kwivenkile? Ngelishwa, ngekhe ukwazi ukutshintsha isatifikethi ngemali ezinkozo. Isatifikethi sesipho luxwebhu oluqinisekisa uxanduva lombutho lokuhambisa iimpahla zawo kumthwali ngenani elilingana ne ...
Ngoku isuswe iJSC kunye ne-JSC. OA ibonakala esikhundleni.
Ngoku i-OJSC kunye ne-CJSC zisusiwe Endaweni yoko kwavela i-OA. Inyani yile yokuba uninzi lwee-OJSCs, ngaphandle kombutho kunye nomthetho, bezisoloko ziinkampani ezingezizo ezaseburhulumenteni. Abekho…
Imibuzo ye-56 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-1,039.